उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने- डा. केसीले सामान्य मागमा अडान लिनुहुँदैन - Deshko News Deshko News उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने- डा. केसीले सामान्य मागमा अडान लिनुहुँदैन - Deshko News
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने- डा. केसीले सामान्य मागमा अडान लिनुहुँदैन
उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आमरण अनशनरत डा गोविन्द केसीले राखेका माग पूरा भइसकेको भन्दै अनशन तोड्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालिबालिका ज्येष्ठ नागरिक समितिले डा केसीले उठाउनुभएका विषयवस्तुलाई समेटेर तयार गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ शुक्रबार पारित गरेको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक प्रा डा केसी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारितलगायत विभिन्न माग राख्दै २० दिनदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ ।
शुक्रबार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपछि पनि डा. केसीले अनशनलाई निरन्तरता भएको भन्दै मुख्य माग पूरा भएकाले सामान्य मागमा अडान नलिनसमेत उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गर्नुभयो । “अस्थायी शिक्षकको मागलाई समेत पूरा गर्नका लागि म प्रतिबद्ध छु”– उहाँले भन्नुभयो ।